Sunrise Seaview Premier Suite w/ Balcony槟城海景公寓
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguThe Landmark
I-Landmark iyi-skyscraper eqhutywa kuyilo ephakama ngokumangalisayo ebekwe kumbindi weTanjung Tokong, ngaphakathi kweSithili soShishino esisembindini, iSibhedlele kunye neZiko lezoNyango, kufutshane neebhanti zabakhenkethi ezidumileyo zaseGurney Drive kunye neBatu Ferringhi.
Sinikezela ngeyona ndlu ilungileyo kude neSuite yasekhaya. Ikhaya leStudio elipholileyo liza nendawo yokuhlala, igumbi lokulala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela labucala kunye nebalcony enombono ongenakuthelekiswa nanto weGurney drive promenade.
IiSuites zethu zeNkonzo ziyilelwe ngobuchule ukuhlangabezana neemfuno zabahambi bale mihla. Uya kuba nayo yonke indawo kuwe kwaye wonwabele amava 'okuhlala ekhaya' kwindawo etofotofo, ecocekileyo nefanelekileyo.
Iindwendwe ezongezelelweyo ze-3rd kunye ne-4th zingahlala kunye nentlawulo eyongezelelweyo ye-RM40nett umntu ngamnye ngobusuku kwibhedi ekhululekile yesofa.
Kwindawo yezityebi eTanjung Tokong, eneIsland Plaza, iStraits Quay kunye neFettes Park kumgama wokuhamba. Indawo ethe kratya kunye nekhuselekileyo enokufikelela ngokulula ekuthengeni izinto zemihla ngemihla, iikliniki, iivenkile zeenwele kunye nobuhle kunye nabanye abaninzi. Yimizuzu eli-10 kuphela ukuya eGurney Plaza edumileyo kunye nemizuzu engama-20 ngemoto ukuya elunxwemeni phambi kweBatu Feringhi.
Umbuki zindwendwe ngu- The Landmark
Zive ukhululekile ukubuza, siyavuya ukukunceda ukuba uhambe, utye ntoni kwaye uye phi.
Iilwimi: 中文 (简体), English, Français, Melayu
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tanjung Tokong